OTA-20, efa misy ny kinova farany mifototra amin'ny Ubuntu 16.04 | Ubunlog
OTA-20, izao misy ny dikan-teny farany mifototra amin'ny Ubuntu 16.04
Vao herinandro lasa izay, nanomboka nangataka ny vondrom-piarahamonina ny UBports mba hizaha toetra ny Kandida Famotsorana ny Ubuntu Touch OTA-20. Na dia tsy dia nanam-pinoana aza aho, dia nanana fanantenana kely aho fa hilaza izy ireo fa mifototra amin'ny Ubuntu 20.04, saingy tsia. Na ny Kandida Famotsorana na ny version stable nambara androany Izy ireo dia. Toy ny ao amin'ny fandefasana teo alohaNy Ubuntu Touch dia mbola miorina amin'ny Ubuntu 16.04, tsy misy fanohanana nanomboka tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity, na dia toa izany aza no farany hanao izany.
Ny fitaovana rehetra izay nametraka Ubuntu Touch dia tokony hahazo ity OTA-20 ity avy amin'ny firafitry ny rafitra, daholo afa-tsy ny an'ny PINE64. Ary tsia, tsy hoe tsy hahazo ireo vaovao rehetra ireo ny fitaovana mananasy; mampiasa nomerao hafa fotsiny izy ireo, fa ireo mampiasa ny fantsona stable dia tokony handray azy ireo tsy ho ela.
Zava-nisongadina tamin'ny Ubuntu Touch OTA-20
Ny fampandrenesana dia nitarika fanohanana ireo fitaovana mifototra amin'ny Halium 9. Ny sasany amin'ireo vaovao dia mety tsy tohanana.
Fanohanana ny endritsoratra Khmer sy Bengali.
Fahafahana manamboatra feo fampahafantarana manokana.
Fitaovana vaovao tohana hametrahana ny rafitra fiasana: Xiaomi Redmi 9 sy 9 Prime (lancelot), Xiaomi Redmi Note 9 (merlin), Note 9 Pro (joyuese), Note 9 Pro Max (excalibur), Note 9S (curtana), Xiaomi Poco M2 Pro (grama) ary Pixel 2 (walleye). Ataovy ao an-tsaina fa manana olana amin'ny fiainan'ny bateria ny Pixel 2, ka mety tsy tena vonona ny ho fitaovana andavanandro.
Nahitsy ny fihemorana izay nanakana ny tsy hisehoan'ireo antsoina hoe fitokisana rehefa sambany ny fampiharana iray dia mila fidirana amin'ny fitaovana sasany, toy ny mikrô, ny GPS, na ny fakantsary.
Nanamboatra lesoka tao amin'ny sosona CalDAV izay nanakana ny fampifanarahana amin'ireo mpizara nampiasa ny mari-pankasitrahana Let's Encrypt.
Ao anatin'ny bibikely hafahafa, ireo mpampiasa Vollaphone dia tsy afaka nandà ny antso fanindroany tonga raha tsy nampitsahatra ny iray ankehitriny.
Ny OTA-20 Fanavaozana farany Ubuntu Touch ary miseho tsikelikely eo amin'ny firafitry ny fitaovana mifanentana samihafa. Ireo mpampiasa PineTab na PinePhone dia hahazo ny vaovao tsy ho ela, fa tsarovy fa ny isa dia ho hafa. Raha tsy misy na inona na inona mitranga, ny OTA-21 dia efa miorina amin'ny Ubuntu 20.04. Ary raha ny marina, izany no antony mahatonga ny vaovao ankehitriny ho ambany noho ny mahazatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu Phone » OTA-20, izao misy ny dikan-teny farany mifototra amin'ny Ubuntu 16.04
GNOME dia manohy manatsara ny fitaovana pikantsary sy libadwaita, ankoatra ny hafa
Sweeper, fitaovana hanadiovana ny rafitra Ubuntu